Horumari Soocelintaada Bulsheed | Martech Zone
Horumarinta Dib-u-habeyntaada Bulsheed
Khamiis, Janaayo 24, 2013 Talaado, Febraayo 24, 2015 Douglas Karr
Warshadeena, dib u bilaabida bulshada waa shuruud. Haddii aad tahay musharrax raadinaya shaqo warbaahinta bulshada, waxaad si fiican u leedahay shabakad weyn iyo joogitaanka khadka tooska ah. Haddii aad tahay musharrax raadinaya shaqo ku habboon hagaajinta mashiinka raadinta, waxaan si fiican u awoodi karaa inaan kugu helo natiijooyinka raadinta. Haddii aad tahay musharrax raadinaya shaqo suuq-geyn ah, waxaan sifiican ugu awood badnaan karaa inaan ku arko qaar ka mid ah waxyaabaha caanka ah bartaada.
Shuruudda loogu talagalay a dib u bilaabida bulshada ayaa ka gudbaya wershedeena hadda. Shirkadaha iyo shaqaaleeyayaashu waxay adeegsanayaan baraha bulshada iyo makiinadaha wax lagu raadiyo - maaha inay dib u eegaan murashaxiinta - laakiin xitaa inay helaan. Ma ku heli karaan? Ma waxaad u dhisaysaa maamul khadka tooska ah ee internetka loogu talagalay astaantaada gaarka ah?
Dib-u-soo-celinta bulshada ee dijitaalka ah waa qaadasho casri ah oo dib-u-habeyn dhaqameed ah. In kasta oo aad hubaal u baahan tahay inaad ku darto waayo-aragnimadaada shaqo iyo aqoontaada dib-u-habeyntaada bulsheed, waxaad ballaarin kartaa macluumaadka aad siiso shaqo-bixiyeyaasha mustaqbalka si loogu daro shaybaarrada shaqada, xiriiriyeyaasha ku habboon iyo kuwo kale.
Tags: xujoshaqo raadintaqorayaashaqoristadib u bilaabida bulshada
Sida Looga Faa'iideysto Raadinta Beddelka Facebook
Mandrill: Qalabka Email ee Codsigaaga
Jan 25, 2013 saacadu markay ahayd 2:10 PM
post cabsi badan oo ku saabsan infographic!